စိမ့်စမ်းရေ: Shut Down Speed တိုးနည်း
Shut Down Speed တိုးနည်း
ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ShutDown ချတဲ့အချိန်မှာ ShutDown Speed နှေးနေတာကို မနှေးရအောင် ShutDown Speed တိုးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
2. HKEY_CURRENT_USER >>Control Panel >>Desktop စတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားပြီတာနဲ့ Desktop ပေါ်မှာ Right click လုပ်လိုက်ပါ။ ညာဘက်မှာ ကျလာတဲ့ Name တွေထဲက WaitToKillAppTimeout ကို ရှာလိုက်ပါ။ ပြီရင် Right click ထောက်ပြီ Modify ကို click လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြောင်းရသေးရင် 20000 လို့ တွေ့ရပါမည်။ 1000 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။
3. ပြီရင် အဲဒီထဲကဘဲ HungAppTimeout ကိုထပ်ရှာလိုက်ပါ။ Right click ပေးပြီ Modify ကို click လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြောင်းရသေးရင် 5000 လို့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1000 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီရင် Ok ကို click လိုက်ပါ။
1. HKEY_USERS >>.DEFAULT >>Control Panel >>Desktop စတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။ Desktop ကိုရောက်တာနဲ့ Right click ပေးလိုက်ရင် ညာဘက်မှာကျလာတဲ့ Name တွေထဲက WaitToKillAppTimeout ကို ရှာလိုက်ပါ။ ပြီရင် Right click ထောက်ပြီ Modify ကို click လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြောင်းရသေးရင် 20000 လို့ တွေ့ရပါမည်။ 1000 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။
2. ပြီရင် အဲဒီထဲကဘဲ HungAppTimeout ကိုထပ်ရှာလိုက်ပါ။ Right click ပေးပြီ Modify ကို click လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြောင်းရသေးရင် 5000 လို့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1000 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီရင် Ok ကို click လိုက်ပါ။
3. HKEY_LOCAL_MACHINE >>System>>CurrentControlSet>> Contr ol အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။ ပြီရင် Control ကိုရောက်တာနဲ့ Right click ထောက်လိုက် ညာဘက်မှာကျလာတဲ့ Name တွေထဲက WaitToKillAppTimeout ကို ရှာလိုက်ပါ။ ပြီရင် Right click ထောက်ပြီ Modify ကို click လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြောင်းရသေးရင် 20000 လို့ တွေ့ရပါမည်။ 1000 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ အထပ်ပါအဆင့်တွေတိုင်းမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သိသိသာသာ Shut Down Speed တိုးလာတာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ref: ( www.aungsanmks.blogspot.com )
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Monday, April 22, 2013